महाबिरको नया सुट - Samriddha Nuwakot News
Banner First समाचार
२०७७ कार्तिक ३, सोमबार ०८:५२ गते samriddhanuwakotnewsLeaveaComment on महाबिरको नया सुट
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका परिकल्पनाकार महावीर पुनले आइतबार सेतो सर्प, नीलो कोट, नीले पाइन्टमा कालो जुत्ता लगाएर ठाटिएको तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरे। त्यसमा पुनले लेखे, ‘लौ हेर्नुहोस्, मैले नि यो वर्षको दसैंमा ता नयाँ कपडा पायो बाई।”
उनले यति मात्र होइन, लामै स्टाटस लेखे। ‘सायद ४५ वर्षपछि मैले दसैँमा नयाँ कपडा पाएको होला। यो कपडा मलाई नै नापेर सिलाइदिएका हुन्। पुरानो जडौरी होइन। मेरो जिन्दगीको यो दोस्रो नयाँ सुट हो। जुत्ताचाहिँ ६ वर्ष पुरानो हो। धेरै साथीहरूले राम्रो कपडा लगाएन भनेर कचकच गरिरहनुभएको थियो। अब कचकच गर्ने साथीहरू चुप लाग्नुहोस्’,
उनले लेखे, ‘आज नयाँ कपडा लगाएको फोटो हाल्छु भनेर हिजो गरेको वाचा पूरा गरे। दसैंका बेला यो नयाँ कपडा कहाँबाट आयो भनेर कसैले पनि नसोध्नु होला। केही महिनापछि मैले नै बताउने छु। क्या रमाइलो हुने भयो यसपालिको दसैं त। कहिलेकाहीं त गल्लीको कुकुरको पनि दिन आउँछ भनेको यही होला।
उनले नयाँ सुट लगाएर फोटो पोस्ट गर्ने रहर किन गरे ? दुई पटकको प्रयासमा उनले फोन रिसिभ गरे। उनले सोधे, ‘भन्नुस् त के काम थियो ?’ मैले (अन्नपूर्ण संवाददाता) कोटको प्रसंग निकालें, ‘खुब राम्रो फोटो अपलोड गर्नुभएछ नि! कोट कति सुहाएको!
उनले अन्नपूर्ण पोस्ट सीता को कुराकानी भने, लुगा किन्ने पैसा नै हुन्न मसँग। सपिङ त कहिल्यै गएको छैन। फेसबुक साथीहरूले अति नै हैरान गरे। जहिले पुरानो लुगा लगाउने भन्दै म्यासेज गर्छन्। मलाई नयाँ लुगा लगाएको हेर्न चाहने साथीहरूका लागि फोटो पोस्ट गरेको हुँ। यो कोटको के काम ? कोट लगाएर काम गर्न मिल्दैन। फोटो खिचिसकेपछि पट्याएर राखेको छु। म सोग ३० वर्षअघि सिलाएको कोट पनि त छ। जुन ०४५ सालमा अमेरिका जाने बेला किन को थिए।
सानैदेखि अभावमा हुर्किएकाले नयाँ लुगा किन्ने बानी नपरेको हुन सक्ने उनले सुनाए। ‘रहर हुँदा पुगेन। अहिले रहर पनि लाग्दैन पैसा पनि पुग्दैन। लुगा किन्न नपरेपछि पैसा बन्छ नि! अन्य अभर टार्न सकिन्छ । नयाँ लुगा नकिनेको त ४ दशक बढी भइसक्यो’, उनले भने।
२०७७ आश्विन १६, शुक्रबार ११:४१ गते samriddhanuwakotnews
सरिता गिरी समाजवादी पार्टीबाट निष्कासन, सांसद पनि नरहने
२०७७ असार २३, मंगलवार १८:१३ गते २०७७ श्रावण २, शुक्रबार १३:५५ गते samriddhanuwakotnews
२०७७ भाद्र १, सोमबार १७:३० गते samriddhanuwakotnews